Waad Qaldantahay, Waa Kuwan 4 Sababood Oo Warbaahinta Bulshadu Saamayn Ugu Leedahay SEO | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 8, 2015 Douglas Karr
Fadlan ma joojin karnaa doodan? Waxay ila tahay inay jiraan dad xirfadlayaal ah oo halkaa jooga oo si xun u sheegaya warbaahinta bulshada iyaga oo aan si buuxda u fahmin saameynta ay leedahay. Bulshadu waa hanaan dhiirrigelin ah oo dhiseysa isku xirnaanta sumadda iyo sidoo kale inay kuu fidiso dhagaystayaal aad u ballaadhan. Ma doonayo inaan dhammaantood ku soo dhex tuuro, laakiin waxay u muuqataa in sawaxanka badankood ay ka imanayaan xirfadlayaal SEO ah - kuwaas oo aan dooneynin inay miisaaniyadda la wadaagaan warbaahinta bulshada. Si la yaab leh, waxay naftooda u sameynayaan xumaan weyn.
Xaqiiqdii, boostadani waa tusaale fiican. Waxaan hayaa ogeysiis bulsheed shabakada oo dhan si ay noogu soo dirto email marka ay jiraan tixraacyo gaar ah oo ku saabsan iibiyeyaasha, shuruudaha iyo tikniyoolajiyada si aan wax uga qorno. Waxaan dib u eegis ku sameeyaa barahaas internet-ka waxaanan inta badan u caddeeyaa waxyaabahaas kuwa raacsan. Xaaladdan oo kale, macluumaadka hoose ee hoose laguma helin mid ka mid ah digniintaas. Laakiin markii aan aqrinayay maqaal kale oo ku saabsan degel, horudhac ku saabsan macluumaadka hoose ee hoose ayaa lagu soo bandhigay qaybta qoraallada la xidhiidha. Ka dib waxaan aqriyay faahfaahinta oo waxaan u maleynayay inay fiicantahay. Ka dib waxaan dib ugu noqday Google si aan u baaro isha uu ka soo jeedo infographic Submitedge SMO, oo helay infographic, Sidee SEO iyo Warbaahinta Bulshadu u saameeyaan Websaydhkaaga?.
Marka, Submitedge SMO dadaaladiisa bulsheed ee lagu kobcinayo xogtooda si dadban waxay si toos ah iigu horseeday inaan kor u qaado iyaga oo u siiya backlink-ka boggooda mawduuc gaar u ah bailiwick-kooda. Boom! Haddayna dadaalkooda ku wadaagayn baraha bulshada, ma aanan helin weligay! Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in haddii AANay ku qiimeynin erey kasta oo la xidhiidha xogtan, ma jirto qaab kale oo aan ku heli lahaa.
Qiimeynta boggaaga ayaa gebi ahaanba kuxiran SEO iyo Warbaahinta Bulshada. Labada dhinacba waa sida laba cagood oo ka caawiya degelku inuu tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo u qaado. Si kastaba ha noqotee, tilmaamayaasha hoos ku xusan ayaa kuu sheegi doona faa'iidooyinka Warbaahinta Bulshada iyo SEO ee qiimeyntaada.
Sidee SEO iyo Warbaahinta Bulshadu u saameeyaan Websaydhkaaga?
Isku Xidhnaansho - tusaalahayga kor ku xusan waa caddaynta saxda ah ee ay tani shaqayso. Ku fidinta adduunka bulsho ahaan waxay kor u qaadeysaa waxyaabahaaga si aad u ballaaran dhagaystayaasha, kordhinta suurtagalnimada in ay la wadaagi doonaan dadka kale. Haddayna tahay sawir-maskaxeed, waxaad u badan tahay inaad kordhisay fursadahaaga!
waxkabadalka - Marnaba kama aanan fikirin tan laakiin maadaama natiijooyinka raadinta ay yihiin kuwo shaqsi u ah qof kasta oo ku soo gala Google, isla markaana loo qoondeeyo qof kasta oo aan ahayn, tani way ku kala duwan tahay natiijooyinka dhabta ah ee loo soo bandhigo raadiye kasta. Isticmaalayaasha bulshada ku hawlan waxay dhisayaan muuqaal shakhsi ahaaneed natiijooyinkaasna waxay u dhigmi karaan dadaalkaaga - iyagoo ku siinaya muuqaal kordhin, muuqaal gaar ah.
Raadinta Su'aal Cod - Mar labaad, u soo bixitaanka adduunka adduunyada waxay dhiseysaa sumcadahaaga kalsoonida, awoodda, iyo isku xirnaanta. Ku billow inaad hesho astaantaada ama aad u wajahdo dhagaystayaal ballaadhan aqoonsiguna wuxuu kuu kaxayn doonaa iibsadayaasha adiga. Balooggan iyo koobkeyga foosha xun ayaa tusaale fiican ah! Waa sababta wejigeygu meel walba u yaalliin - haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba;).
Calaamadaha calaamadaha - Iyadoo isbeddelada algorithm ee dhowaanahan iyo horumarka laga sameeyay algorithm-ka Google, waxaan rumeysanahay in qaar badan oo ka mid ah waxyaabihii hore ee loo yaqaan 'SEO' ay si weyn u dhayalsanayso saameynta xigashooyinka ee ku saabsan ansaxinta xiriirka iyo; ugu dambayn, darajayn. Magacaaga magacaaga, magacaaga wax soo saarka, magaca shaqaalaha, cinwaanada iyo lambarrada taleefannada dhammaantood waa xubno xog ah oo kala duwan. Iyaga oo halkaa looga saaro dhammaan baraha bulshada waxay cadeyneysaa jiritaankaaga iyo awoodaada.
Waxay ila tahay xiiso aniga in xirfadleyda raadinta casriga ahi ay galiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin kana shaqeeyaan sidii loo heli lahaa waxyaabahaas oo lagu soo bandhigo goobaha warbaahinta ee la kasbaday. Sidee bay taas u sameeyaan? Badanaa iyada oo loo marayo xeeladaha xiriirka dadweynaha. Ka fikir taas… waxay adeegsanayaan dadaallada bulshada si loo kordhiyo suurtagalnimada in isku xirnaanta laga soo saaro waxyaabaha ay si gaar ah u qoreen ama ay wadaagaan bogagga saamaynta leh. Hmmm that miyaanay taasi suurtogal ku ahayn baraha bulshada? Haa, haa waa tahay.
Tags: saameynta bulshadaayna search engineraadi xeeladaha suuqgeyntaraadinta darajadaraadso bulshadaSEOseo iyo bulshoxeeladaha seoseo vs bulshadabulshada iyo raadintabulsho iyo seosaamaynta bulshadaxeeladaha warbaahinta bulshadaxeeladaha bulshadabulshada ka soo horjeeddabulsho vs seosubmitedge smo
3 Isbeddellada Teknolojiyada ee ay tahay inay suuqyadu daawadaan 2015
Jan 8, 2015 saacadu markay ahayd 5:17 PM
Nice one Doug. Taasi waxay tidhi, waxaan u malaynayaa inaad isku khilaafayso laba aragtiyood oo kaladuwan oo ku saabsan bulshada re SEO (oo waan ogahay inaadan runti ahayn laakiin waa blog markaa aan dood yeelanno. Maxaa kale oo loogu talagalay?):
1. Dhaqdhaqaaqa bulshada wuxuu u horseedi karaa waxyaabo sababayaal kala duwan leh
2. Hawlaha bulshadu waa “isir qiimeyn”
Waan ku raacsanahay # 1. Kuma raacsani # 2 marka laga reebo qaar ka mid ah wax-qabadka aad u adag ee ku dhaca Google+.
Jan 8, 2015 saacadu markay ahayd 5:23 PM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay Andrew! Waxay ahayd inaan taas ku caddeeyo qoraalkayga. IMO, haddii aadan ka shaqeynaynin dadaalkaaga bulsheed, waxay ka dhigeysaa darajaynta intaas in ka sii badan. IMO waa inaad ku fiicantahay labadaba.
Jan 9, 2015 saacadu markay ahayd 1:51 PM
Hagaag runti waxaad tihiin sayid clickbait 🙂
Jan 9, 2015 saacadu markay ahayd 4:35 PM
Si daacadnimo ah hadafkeyga ma ahayn, laakiin waan qaadan doonaa!